vendredi, 01 octobre 2021 19:04
Vaksiny Covid-19 : Mila jerena akaiky ireo mpilatsaka an-tsitrapo
Ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 izao, dia niantso hatrany ireo tsara sitrapo ny fanjakana anolo-tanana azy, na tamin'ireny fotoana nampirongatra ny aretina ireny, na amin'izao fanaovam-bakisiny izao, izay hikendrena ny fahavitan'ny 70% n'ny Malagasy, izay antoka hifehezana tanteraka ny aretina.
Maro ireo namaly ny antso, ary dia nanolo-tena ho an'ny mpiara-belona. Ekena fa tsy nisy resaka fanambazana vola na karama izany asa fanoloran-tena izany, nefa kosa tokony ho jerena manokana izy ireo, na ny fiarovana azy ireo amin'ny asa izay miatrika mivantana ny aretina, na ny sakafo sy tohan'aina mandritra ny fanatanterahana ny asa, satria dia tsy mody izy ireo fa miaritra ny anohanana ny sasany. Tsy mahazo fanampiana ara-bola na dia vatsy kely sy saran-dalana aza, toa vava indray no azo hoe "Inona no maha bénévole anareo"?
Ireo mpiasan'ny fahasalamana efa mpiasam-panjakana moa dia mahazo ny karama andavanandro fotsiny, tsy misy fitsinjovana amboniny amin'ny asa izay tanterahana.
vendredi, 01 octobre 2021 17:38
Covid-19 : Rehefa vita Vaksiny ny 70% n'ny Malagasy vao azo heverina fa tapitra sy voafehy ny valanaretina
Manentana ny rehetra hanao vakisiny hiarovana amin'ny Covid-19.
Ny Vaksiny no vahaolana amin'ny mety fihitaran'ny valanaretina, ka ahafan'ny Firenentsika tsy hiolonolona irery eto, hampisokatra ny sisin-tany, hivezivezen'ny olona sy ny entana malalaka, na eto an-toerana na any ivelany, na ireo Malagasy manao fihariana, na ireo vahiny hitsidika ny tanintsika hidiran'ny vola vahiny, sy ampandroso ny fiariana fizahantany, ireo mpandray vahiny, mpanofa fiara sy ireo asa tanana maro miankina betsaka amin'ny fizahantany.
Manantona ireo Tobim-pahasalamana akaiky antsika. Mitondra fotsiny phocotocopie karapanondro, tsy misy 15minitra dia vita hatramin'ny famenoana ny taratasy, ny vakisiny 1 minitra dia vita. Arovy ny ainao sy ny fianakavianao sy ny manodidina anao.
Mankasitraka ireo mpiasan'ny fahasalamana, ireo dokotera sy mpanampy azy, ireo Bénévole sy tsara sitrapo manolo-tena manampy ny mpiara-belona, izay tokony ho jerena manokana ny fitsinjovana azy ireo.
vendredi, 01 octobre 2021 10:07
Polisim-pirenena 60 taona : Kihon-dalana hanehoana ny fomba fiasa vaovao
Nankalaza ny faha 60 taonany ny alakamisy 30 septambra 2021 ny Polisim-pirenena. "Polisim-pirenena Miaro sy manampy ny vahoaka" no lohahevitra nanankinana ny fankalazana. Nomarihina tamin'ny fitokanana Tsangambato tetsy Anosy izany.
Nanome voninahitra ny fotoana ny Praiminisitra lehiben'ny governementa, Ntsay Christian. Nanambara ity farany fa manan-danja eo anivon'ny vahoaka Malagasy ny Polisim-pirenena. Betsaka, hoy izy, ny asa vita ary mbola betsaka ny miandry.
Ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, Contrôleur Général de Police Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys, kosa nilaza fa kihon-dalana hanehoana ny fomba fiasa vaovao ny faha 60 taonan'ny Polisim-pirenena . Anisan'izany ny fanehoana ny fahaiza-manao sy ny toe-tsaina lavitry ny kolikoly.
vendredi, 01 octobre 2021 09:25
Maroalomainty : Tsy tanteraka ny fitokanana ny fotodrafitrasa vaovaon’ny Brigadin’ny Zandarimaria
Raha voalahatra hotokanan'ny filoham-pirenena ny alakamisy 30 septambra 2021, dia tsy tontosa ny lanonam-pitokanana ny foto-drafitrasa vaovaon’ny Brigadin’ny Zandarimaria ao amin’ny Kaominina Maroalomainty, Distrika Ambovombe, Faritra Androy.
Resaka an-jorony no heno, rehefa niandry adim-pamantaranandro enina ny tao an-toerana, fa tsy ho avy hitokana ny filoha raha tsy misy fanaka ny trano.
Nifarimbona tao daholo ny rehetra, na sivily na zandary na mpitondra tao an-toerana hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity nanomana ny lanonana. Najanona avokoa ny andavanandrom-piainana fa nanadio, nandamina satria tamin’ny 9ora maraina ny fotoana nomen'ny tao fiadidiana ny Repoblika ny tao an-toerana hanaovana ny fitokanana.
Vao maraina dia fa feno zandary teo amin’ny toerana misy ny foto-drafitrasa. Vory maro ihany koa ny Vahoaka sy ny olom-boafidy avy ao amin’ny Kaominina Maroalomainty.
vendredi, 01 octobre 2021 09:23
Andry Rajoelina tao Ambovombe : Fitokanana zava-bita sy famelan-keloka
Mitsidika ny any Androy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady nanomboka omaly alakamisy 30 septambra ary hitohy hatramin’ny 3 oktobra 2021.
Nanamarika ny andro voalohan’ny diany tany Ambovombe Androy ny fijerena sy fanolorana ireo fotodrafitrasa fampandrosoana naorina amin’iny faritra iny, ary koa ny famelan-keloka ireo voatana am-ponja noho ny disadisa tamin’ny fanombohan’ny fanatanterana ireo tetikasa sasany, toy ny nitranga tao Ambovombe ny aprily 2021 tamin’ny fanorenana tsena manarapenitra.
Androy no faritra voalohany notsidihan’ny filoham-pirenena taorian’ny diany tany New-York ka nahazoan’i Madagasikara ny vola fanampiana tsy averina mitentina 332 tapitrisa dolara.
Androy no isan’ny hisitraka voalohany izany vola izany amin’ny alalan’ny fanatanterahana ny tetikasa famatsian-drano ny faritra Atsimo amin’ny alalan’ny fametrahana fantsona goavana na « pipeline » miainga avy any Efaho Tolagnaro ka hipaka any Ambovombe.
Hiroso tsy ho ela ny tolo-bidy sy ny tolo-barotra hanatanterahana ny asa raha ny nambaran’ny filoha.